महजोंग Em प्रविष्ट गर्नुहोस् र Emulator.online बाट आनन्द लिनुहोस्
महजोंग महजोंग एक खुफिया खेल हो जुन धेरै सांद्रता चाहिन्छ, बुद्धि र अन्तरदृष्टि। माह जोंग खेल्न सिक्नुहोस्, उत्तम सम्भावित संयोजनहरू बनाउनुहोस् र ठूलो विजेता बन्नुहोस्।
माहजोंग: कसरी चरण Step चरण प्ले गर्ने
खेल्नु माजोङ नि: शुल्कका लागि अनलाइन, तपाईंसँग गर्नुपर्ने छ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
2 चरण। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं मात्र गर्न छ हिट खेल र अब तपाईं तिनीहरूलाई समाप्त गर्न उही टुक्राहरू खेल्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
3 चरण। यहाँ केहि उपयोगी बटनहरू छन्। "आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्"," बटन थिच्नुहोस्प्ले"र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं"रोक्नुहोस्"र यसलाई रोक्नुहोस्, सोध्नुहोस्"मद्दत"वा"पुन: सुरू गर्नुहोस्"कुनै पनि समय।
4 चरण। खेल समाप्त नभएसम्म सबै जोडीहरू हटाउनुहोस्, सधैं खेलको नियम सम्झदै। अन्त्यमा, तपाईं आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र यसलाई सामाजिक नेटवर्कमा साझा गर्नुहोस् एक पटक तपाईले खेल समाप्त गर्नुभयो।
5 चरण। एउटा खेल समाप्त भएपछि, क्लिक गर्नुहोस् "खेलहरू" अन्य नक्शामा खेल्न।
पनि हेर्नुहोस् आधिकारिक माहजोंग नियमहरू यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक नियमन यो लोकप्रिय खेल को।
महजोंग के हो? 🀩
माह जोंग एक j छचिनियाँ मूलको खेल players खेलाडीहरू द्वारा खेलाइएको र आजको सबैभन्दा रमाइलो र प्रशंसा गरिएको खेलहरू मध्ये एक हो। यो गणना, कौशल र रणनीतिको खेल हो र यसको खेल एकदम मिल्दोजुल्दो छ डोमिनो.
खेल छ १144 टुक्रा र यीसँग विशिष्ट चिनियाँ वर्ण र प्रतीकहरू छन्, जसले धेरै बिभिन्न संयोजनको साकार गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि त्यहाँ केहि क्षेत्रीय भेरियन्टहरू छन् जसले अंशहरूको फरक संख्या प्रयोग गर्दछ।
खेलको मुख्य उद्देश्य भनेको वैध हात बनाउने पहिलो हो जुन न्यूनतम स्कोर आवश्यकता पूरा गर्दछ। हातको मूल्य परिवर्तनशील हो र यसलाई कम्पोज गर्ने संयोजनको कठिनाईले परिभाषित गर्छ।
माहजोंग को खेल इतिहास विशेषज्ञहरु बीच एक उच्च बहस विषय हो। केहि यो मानिएको छ २ 2500०० भन्दा बढी वर्ष र अरूले यो १ claim औं वा १ th औं शताब्दीको हो भनेर दावी गर्दछन्। १ th औं शताब्दी अघि, तथापि, कुनै ऐतिहासिक रेकर्ड छैन।
चिनियाँ कथा अनुसार चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसिज उनी बोर्ड खेलको आविष्कारमा संलग्न थिए। यद्यपि यसका लागि कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन। यो केवल निम्न कथासँग मिथ्या वा मिथ्या हो:
एउटी सुन्दरी आइमाई एक समय एक्लो एक्लो राजा वूको दरबारमा बस्थिन्। म प्रायः मृत्युको बन्धनमा परेको थिएँ। एक दिन उनले बाँस र हात्तीको दाँतबाट आकृतिहरू कोर्न शुरू गरे जुन डोमिनो स्टोन्सको आकारसँग मिल्दोजुल्दो छ। जब उनले समाप्त गरे, उनले आफ्नो नोकर्नीहरू ल्याए र उनीहरूसँग खेल्न थाले। कन्फ्युसियसलाई यो खेल अझ विकसित भएको छ भनिन्छ।
चिनियाँबाट अनुवाद गरिएको यसको अर्थ "माहजोंग" साथै "बकबक भँगेरा"र, पौराणिक कथाको अनुसार, बोर्ड खेलले यो नाम पायो किनकि एक कन्फ्युसियसले सबै प्रकारका चराहरूलाई मन पराउँथ्यो। खैर, केवल कुलीनहरूलाई खेल खेल्न अनुमति दिइयो। यदि साधारण मानिसहरूले यो खेले भने, तिनीहरूले कानून भ breaking्ग गर्दै थिए।
अर्कोतिर, इतिहासकारहरू महजोंगको खेललाई विश्वास गर्छन् १०० र ११ औं शताब्दीमा चीनमा कागजात भएका प्राचीन चिनियाँ कार्ड खेलहरूबाट उत्पत्ति भएको हो। तिनीहरूले खेलको मूल को स्थान मा खोज्न शंघाई, अनहवेई र किian्ससु, त्यस्ता कार्ड गेमहरूको प्रमाणको रूपमा यहाँ फेला पर्‍यो।
माहजोंग खेल टुक्रा 🀄🀩
नियमित सेटमा हुन्छ १136 वा १144 टुक्रा। महजोंग सेटहरू बिभिन्न कोटीहरूमा विभाजित छन्:
सूट टुक्राहरू "सर्कल"
सूट टुक्राहरू "बांस"।
सूट टुक्राहरू "क्यारेक्टर"।
तीन ड्रागनको टुक्रा।
मौसमहरु को टुक्रा।
महजोंग अनलाइन खेल
महजोंग अझै पनी खेलेको छ परम्परागत बोर्ड खेल। यद्यपि, अनलाइन खेलहरू लोकप्रिय भएपछि, महजोंगका विभिन्न संस्करणहरू इन्टरनेटमा देखा पर्न लामो समय लागेन।
आज, यसको अनलाइन संस्करणमा बोर्ड खेल एक सबै भन्दा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक पनि हो, र फ्ल्यास खेलको रूपमा यो सामान्यतया नि: शुल्कको लागि प्रस्ताव गरिन्छ। त्यसैले उहाँले महजोंग खेल एक अनलाइन खेल को रूप मा मोटिफ को एक विस्तृत विविधता को विविध प्रकारको मा उपलब्ध छ। परम्परागत खेलको सबैभन्दा लोकप्रिय संस्करणहरूमा समावेश:
कालो र सेतो २
खेलको आधारभूत सिद्धान्त त्यो हो सबै टुक्राहरू कुनै एक समयमा जोडीमा खाली गर्नुपर्दछ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा हो मिल्दो जोडी क्लिक गर्नुहोस् (समान स्वरूप) यद्यपि ढु stones्गा मात्र हटाउन सकिन्छ यदि तिनीहरू अरू ढु stones्गाले ढाकिएन भने।
तपाईं कम्तिमा एक तर्फ स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ। पत्थरहरू कसरी निर्भर छन्, अवश्य पनि यो हुन सक्दछ, थप जोडीहरू पर्दाफास हुँदैनन्। खेल सकियो। खेल माउसको साथ मात्र नियन्त्रण गरिन्छ।
माहजोंग खेलको एक खास फाइदा यो हो कि यसले केवल तार्किक सोचलाई मात्र बढावा दिदैन, तर पनि ध्यान केन्द्रित गर्न र सम्झन सक्ने क्षमता.
महजोंगका विभिन्न प्रकारहरू
रेकर्डका अनुसार चिनियाँ व्यापारीहरूले खेललाई पश्चिमी देशहरूमा ल्याए। खेलका बिभिन्न नियम र विधिहरू आविष्कार गरिएको थियो। थोक बिक्रेता JP Babock उनी नियमहरू सरलीकृत गर्न चाहन्थे त्यसैले उनले पुस्तक प्रकाशित गरे "माह-जोंगका लागि नियमहरू"परिणाम स्वरूप, महजोंग बढी लोकप्रिय भयो।
महजोंगको अमेरिकी संस्करण लगातार परिवर्तन गरिएको छ र मूल संस्करण भन्दा धेरै फरक छ। सम्बन्धित संस्कृतिको नियम पनि जापान वा ग्रेट ब्रिटेन जस्ता अन्य देशहरूमा अनुकूलित गरिएको छ। खेलको ह Hongक Kong र क्यान्टन संस्करण आज अधिक बार खेल्दछ।
आज महजोंगका प्रकारहरू🀧
ह Hongक Kong मह्जोंग वा क्यान्टोनिज महजोंग 🀄
सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको फार्म हो ह Hongक Kong मह्जोंग वा क्यान्टोनिज महजोंग। अनलाइन जुवा हलहरूको आविष्कारको साथ, जापानले आफ्ना हलहरूमा जुवा खेल्न शुरू गर्‍यो, जसले खेलाडीहरूलाई अनुमति दिन संसारको विभिन्न भागहरु बाट अरु संग कनेक्ट। यसले खेललाई अझ लोकप्रिय बनायो, र प्रसिद्ध खेल को नयाँ संस्करण फेरि जारी गरियो।
उत्सुकतापूर्वक, खेलको मूल चिनियाँ संस्करण अब चीनमा खेल्दैन। त्यहाँ थोरै मात्र छन् पश्चिममा थोरै वफादार अनुयायीहरू।
चीनमा, साथै ह Hongक Kongमा, खेलको संशोधित संस्करण धेरै लोकप्रिय छ। अन्य १ 1930 s० को पछिल्लो परिवर्तनले महजोंगलाई एक लोकप्रिय जुवा खेल बनायो। मौकाको अन्य खेलहरू जस्तो नभई, एक व्यक्तिले महजोंग खेल जित्न सक्दैन किनकि ऊ भाग्यशाली थियो।
खेल आवश्यक छ रणनीति, गति र सफल गर्न अन्य खेलाडीहरूको विश्लेषण। यसले माहजोंगलाई अन्य खेलहरू भन्दा राम्रो र बढी बौद्धिक अवस्थाको ग्यारेन्टी दिन्छ।
महजोंग संग फरक यो छ कि तपाईं आफैले खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबै समान टाईलहरू हटाउनु पर्छ महजोंग मास्टर बन्नको लागि। तपाईको काम भनेको स्कोर गर्न मिल्दो टुक्रा फेला पार्नु र हटाउनु हो। शीर्ष र बाहिरी तहहरूबाट सुरू गर्नुहोस्, र केन्द्रको तर्फ काम गर्नुहोस्। اورसुरू गर्नुहोस् यदि त्यहाँ कुनै मान्य चाल बाँकी छैन भने!
आधिकारिक माहजोंग नियमहरू
माह जोंग सही रूपमा खेल्नको लागि, तपाईंले यसको मुख्य अवधारणाहरू बुझ्नु र यसलाई आन्तरिककरण गर्न आवश्यक छ। यहाँ आधिकारिक माहजोंग नियमहरू छन्। यस लेखमा समावेश सबै जानकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय महजोंग नियमहरूबाट निकालिएको छ।
हामी आशा गर्दछौं तपाईंले यसको पूर्ण लाभ लिन सक्नुहुन्छ। 🙂
तपाइँले महजोंग खेल्न सुरू गर्न के आवश्यक छ?
१144 वा १136 महजोंग ढु stones्गा
माह जोंग, बनेको खेल हो 144 भागहरू। ती सबैमा त्यहाँ धेरै चिनियाँ वर्णहरू र प्रतीकहरू छन् जसले विभिन्न संयोजनहरूको साकार गर्न अनुमति दिन्छ। टुक्राहरू जुन एक मह जोंग खेल बनाउँदछन्:
सामान्य टाइलहरू १ देखि from सम्म गन्ती गरिन्छ, र तीन सूटहरूमा सामूहिक रूपमा राखिन्छ:
सर्कल वा बलहरू
प्रत्येक कार्डमा त्यहाँ चार समान हुन्छन् (अर्थात् हामीसँग उदाहरणका लागि चार अक्षरहरूको तीन कार्डहरू हुन्छन्)। सामान्य टोकनहरू अन्य नामहरू द्वारा पनि बोलाइन्छ:
चिप्स गर्न एक y नौ (१ र)) प्रत्येक सूटलाई "" पनि भनिन्छटर्मिनलहरू".
बीचमा चिप्स गर्न दुई र आठौं प्रत्येक सूटको (२-2) "" चिनिन्छसरल".
हामी दुई प्रकारका विशेष चिप्स पाउन सक्छौं:
फूल र andतु टोकन
यी टाईलहरू विशेष भनिन्छ किनकि उनीहरू सामान्य भन्दा फरक स्कोर गर्दछन्।
ऑनर टोकन सामान्यतया खेलमा सब भन्दा मूल्यवान टोकन हुन्, न केवल उनीहरू अधिक अंकको लायक हुन्छन्, तर तिनीहरू कहिलेकाँही एक अंकमा सम्पूर्ण स्कोरको मान गुणा गर्दछन्।
फूल र स्टेशन टोकनहरू तपाईको छोड्ने बित्तिकै देखाइनुपर्नेछ, र ती केवल केहि अ earn्क कमाउन प्रयोग गरियो, र अर्को टोकन लिन। उनीहरूले खेललाई धेरै नै प्रभाव पार्दैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई "बोनस चिप्स" पनि भनिन्छ।
त्यहाँ धेरै माहजोंग नियमहरू छन् जुन फूल र मौसम टाइलहरू विचार गर्दैनन्, तिनीहरूलाई खेलबाट हटाएर।
सम्मान टोकन मध्ये हामी दुई प्रकारका छुट्याउन सक्छौं:
ड्र्यागोनहरू: रातो, हरियो र सेतो।
हावाहरू: पूर्वबाट, दक्षिणबाट, पश्चिमबाट र उत्तरबाट।
सामान्य टोकनहरू जस्तै प्रत्येक सम्मान टोकन चार पटक दोहोरिन्छ (उदाहरणका लागि त्यहाँ South दक्षिण वायु टोकनहरू छन्)।
अन्तमा, हामीसँग फूल र सीजन टाइलहरू छन्, जसले आठवटा टाइलहरू थप गर्दछ:
चार फूलहरू: तिनीहरूसँग प्राय: निलो वा कालो मा पिक्टोग्राम छन्, र रातोमा गन्ती गरिएको।
चार .तुहरू: तिनीहरूसँग लगभग सँधै रातोमा तस्विरहरू हुन्छन्, र नीलो वा कालोमा गणना गरिएका हुन्छन्।
फूल र asonsतुहरू सिधा हावासँग सम्बन्धित छन्, र प्रत्येक हावाको सम्बन्धमा बोनस टोकनको रूपमा स्कोर गर्न प्रयोग गरिन्छ:
La फूल १ र स्टेशन १, हावासँग सम्बन्धित छ Este.
फूल २ र स्टेशन १, हावाको साथ मा.
जब हामी फूलको बारेमा कुरा गर्छौं फूल १ र स्टेशन १, हावाको साथ पश्चिम.
La फूल १ र स्टेशन १, हावाको साथ उत्तर.
खेलको उद्देश्य हो सकेसम्म धेरै अंक प्राप्त गर्नुहोस् "बनाउने माहजोंग" को लागि कमाउनु पर्ने।
RCM मा महजोंग गर्न यो हुनु आवश्यक छ 8 बिन्दुहरू कम्तिमा (फूल / मौसम बिन्दुहरू समावेश नगरी), त्यसैले तपाईं चालहरू राम्ररी जान्नुपर्दछ।
माहजोंगको पूरा खेल १ hands हात वा खेलहरू हुन्छन् जुन राउन्डहरूद्वारा विभाजित हुन्छ: Games राउन्ड चार खेल प्रत्येक।
जे होस् पूर्ण खेल १ hands हात वा खेल हो, प्राय: टूर्नामेन्टमा यो समय द्वारा खेलाइन्छ। सामान्यतया, खेलहरू या त 90 ० मिनेट वा २ घण्टा हुन्छ।
प्रत्येक राउन्डको एक सम्बन्धित हावा हुन्छ, जुन प्रत्येक खेलको अन्त्यमा स्कोरहरू स्थापना गर्न प्रयोग गरिन्छ, र जसलाई भनिन्छ प्रचलित हावा:
पहिलो राउन्ड: पूर्वी हावा
दोस्रो राउन्ड: दक्षिण बतास
पहिलो राउन्ड: पश्चिम हावा
पहिलो राउन्ड: उत्तरी हावा
प्रत्येक दौरको हावाले खेललाई सीधा असर गर्दैन, केवल स्कोरहरू। प्रत्येक राउन्डको अन्त्यमा, ए सिटको परिवर्तन.
हावाको वितरण मात्र एक पटक, र अनियमित रूपमा, खेलको सुरूमा गरिन्छ।
प्रत्येक हावा एक स्थिर स्थिति तोकिएको छ। पूर्वको दक्षिणमा दायाँ पट्टि उत्तर, यसको देब्रेपट्टि उत्तर र पश्चिम अगाडिको हुनुपर्छ।
नोट गर्नुहोस् कि यो मुख्य संकेतहरूसँग सहमत छैन!
उसलाई छुने हावामा निर्भर गर्दै, प्रत्येक खेलाडी त्यो स्थिति अनुसार बस्न पर्छ। हावाहरूको वितरण धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ, तर सबैभन्दा साधारणहरू यी हुन्:
प्रत्येक खेलाडी पासा रोलिंग र हावाहरूको साथ संख्या निर्दिष्ट गर्दै (१ = पूर्व, २ = दक्षिण, = = पश्चिम, = = उत्तर र ,,1 = फेरि रोल)।
प्रत्येक हावाको अनुहारको एक टुक्रा तल राख्दै, र प्रत्येक खेलाडीले एक टुक्रा छनौट गर्दछ।
प्रत्येक खेल अघि
भित्ता हुन्छ २ ब्लकहरू de To टोकन उच्च, एक वर्ग बनाउने, र खेल मा प्रत्येक हातको सुरूमा निर्माण हुनुपर्छ।
प्रत्येक खेलाडीले भित्ताको भाग बनाउनु पर्छ प a्क्ति १ 18 टाईल लामो र २ टाईल्स अग्लो राखेर सबै अनुहार तल।
प्रत्येक खेलाडीले पर्खालको एक छेउमा निर्माण गरेपछि परिणाम १ 18 ब्लक x १ blocks ब्लकको वर्ग हुनुपर्दछ।
टोकनहरू वितरण गर्नु अघि, पर्खालको कुन पक्षमा हामी वितरण सुरू गर्न जाँदैछौं भनेर हेर्नु आवश्यक छ।
यो गर्न, खेलाडी Este सुरु हुनेछ दुई पासा, जसले भित्ताको छेउमा संकेत गर्दछ जसमा चिप्स वितरण सुरु हुनेछ।
पर्खालको अंश पत्ता लगाउन जहाँ वितरण सुरु हुन्छ, यसलाई पूर्वबाट शुरू गरीएको छ र खेलको क्रममा (काउन्टर-क्लॉकवाइज) अनुसरण गर्दै छ। तसर्थ, तपाईं पर्खालको पूर्वी भागबाट शुरू गर्नुहुन्छ यदि तपाईं पासाको साथ or वा roll रोल गर्नुहुन्छ भने दक्षिणी भागको साथ यदि तपाईं २, or वा १०, र यस्तै अन्य रोल गर्नुहुन्छ भने।
हाम्रो उदाहरणमा, पूर्वी खेलाडीले6र5गुडाएको छ जुन स indic्केत गर्दछ कि भित्ता पश्चिम खेलाडीको छेउमा खुल्नेछ (+ + = = ११)।
पर्खालको टुक्राको अगाडि अवस्थित प्लेयर जुन मार्फत ब्रेक गरिने छ अरूको शूटिंगको जिम्मामा छ २ पासा जसले टाइलहरूको ब्ल्क स indicate्केत गर्दछ जुन भित्र पर्खाल खोलिनेछ (जुन, ब्लाक जुनबाट टाईलहरू लिइनेछ)। हाम्रो उदाहरणमा यो वेस्ट खेलाडी हो।
चिप्स को वितरण प्रत्येक खेलाडी द्वारा चिपहरूको आफ्नो ब्लक लिने गरेर गरिन्छ।
सुरू ब्लक फ्याकिएको चार पासाको योग संख्याको पछाडिको हुनेछ (पर्खालको छेउमा जान्न २ पासा जहाँ वितरण सुरु हुन्छ र अन्य २ पासा ब्लकलाई जान्न)।
यो सुरु हुन्छ दाँया देखि बाँया गणना गर्नुहोस् पहिलो दुई पासाले संकेत गरेको भित्ताको छेउमा (प्लेयरको दृष्टिकोणबाट जुन पर्खालको छेउमा छ जुन यो खोल्दछ। हाम्रो मामलामा, वेस्ट प्लेयर)। उहाँ लिनुहुन्छ अर्को ब्लक ब्लकमाdपासा थप्नुहोस्।
नोट: नोट गर्नुहोस् कि यो केस हुन सक्छ किdपासाको योग १4भन्दा ठूलो छ (जुन पर्खालको एक छेउको चौडाई हो)। त्यो अवस्थामा, पर्खालको अर्को छेउमा पहिलो ब्लक पासाको योग नपुगुन्जेल गणना गर्न जारी रहन्छ।
हाम्रो उदाहरणमा, पश्चिमले अर्को २ पासा घुमाएको छ र2र4रोल गरिएको छ। त्यसैले, चिप्सको वितरण ब्लक २० (+ + + + + + = = २०) ब्लाकबाट बनाइनेछ। त्यो हो, तपाईंले भोलिको नम्बर २० मा भित्ताबाट टाईलहरू लिन थाल्नुहुनेछ, दायाँ देखि बाँया (पश्चिम खेलाडीको दृष्टिकोणबाट) पश्चिम ब्ल्यायर खेलाडीको छेउमा पहिलो ब्लकबाट।
वितरण टाइल सुरु हुनु अघि टाइल भित्तामा अन्तिम टाइल हुनेछ।
हाम्रो उदाहरणमा, भित्तामा अन्तिम टाइल खण्ड २० (निलोमा) को माथि टाइल हो, र टाईलहरू लिइएको ब्लक जुन रातो ब्लक हो।
RCM मा त्यहाँ छैन मरेको पर्खाल.
पूर्व प्लेयरले टोकनको पहिलो दुई खण्डहरू लिनेछ (कुल to टोकनहरूमा)।
अन्तिम टोकनको साथ ब्लक सामान्यतया घुमाइन्छ (तर आवश्यक छैन) स्पष्ट रूपमा संकेत गर्नका लागि कि भित्ताको त्यो छेउ अन्तिम हो। यो ब्लक कुनै पनि खेलाडी द्वारा बदल्न सकिन्छ (सामान्यतया यो ब्ल्कको अगाडि प्लेयर वा पूर्व प्लेयर आफैले)।
त्यसपछि दक्षिण खेलाडी अर्को दुई ब्लक लिने थियो।
त्यसो भए पश्चिमी खेलाडीले अर्को दुई लिनेछ।
त्यसपछि उत्तर खेलाडी अर्को दुई ब्लक।
पछि, पूर्वी खेलाडीलाई अर्को दुई ब्लक दिइनेछ।
र यसैले प्रत्येक खिलाडीले उनीहरूको blocks टाइलहरूको तीन ब्लकहरू लिदा सम्म (जुन त्यस अवस्थामा प्रत्येक खेलाडीमा कुल १२ टाइल हुनुपर्दछ)।
अन्तमा, पूर्वी खेलाडीले २ टाइलहरू लिनेछ (रातोमा चिन्ह लगाइएको ब्लकको शीर्ष टाइलहरू)।
र त्यसपछि दक्षिण, पश्चिम र उत्तर खेलाडीहरूले एक-एक टोकन लिन्छन्।
सम्झौताको अन्त्यमा, प्रत्येक खेलाडीसँग १ except चिपहरू हुनेछन्, पूर्वको बाहेक, जसमा १ have हुनेछ। पूर्वका खेलाडीले पागललाई उसको दाहिनेपट्टि राख्नेछन् जुन उसले पूर्व हो भनेर संकेत गर्दछ।
क्लासिक चिनियाँ नियमहरू डेड वाल टोकन डील
El चिपहरू लिन सुरु गर्न बाट रोक्नुहोस् स्थितिमा अवस्थित ब्लक हो जुन जोडको स indicates्केत गर्दछ तीन पासा पहिले रोल.
Se दाँया देखि बाँया गणना गर्नुहोस् पर्खालको त्यो पक्षमा व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट।
हाम्रो उदाहरणमा, सुरू ब्लक पर्खालको उत्तर तर्फ १२ ब्लक हो। अर्को शब्दमा, तपाईले भित्ता १२ बाट टाइलहरू लिन थाल्नुहुनेछ जुन चित्रमा रातो ब्ल्क हो।
एकचोटि तपाईंले थाहा पाउनुभयो कि तपाईं कहाँबाट टाईलहरू लिन थाल्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ टाईल्सको समूह छ जुन खेल भर सामान्य टाईलहरू चोर्न प्रयोग गर्न सकिँदैन। यी टोकनहरू भनिन्छ मरेको पर्खाल, र ती छन् To टोकन (त्यो हो, blocks अवरोधहरू) जुन केवल थप चिपहरू संकलन गर्न कार्य गर्दछ।
सँधै रहनु पर्छ १ dead मृत भित्ता टोकनहरू। त्यसकारण, मृत पर्खाल सर्नेछ किनकि यसले थप प्रतिस्थापन टाईलहरू लिइएको छ। यदि मृत पर्खाल खेल समाप्त नगरी पुगेको छ भने, खेल कसैलाई जितेको बिना माथि विचार गरिनेछ (यो स्थिति भनिन्छ शून्य हात).
हाम्रो उदाहरणमा, यो १ t टाईलहरू (blocks ब्लकहरू) गृह टाइलबाट दायाँ तिर। तिनीहरू निलो ब्लकहरू हुन्।
एक पटक सुरू ब्लक स्थापना भएपछि, चिप सौदा सुरु हुन्छ। माथि वर्णन गरिए अनुसार प्रत्येक खेलाडीले टोकनको ब्लक लिन्छ।
सुरु गर्नु अघि, हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि त्यहाँ basic आधारभूत संयोजनहरू छन् वा महजोंगमा चालहरू छन्, तर तिनीहरूलाई बनाउन सक्षम हुन केही नियमहरू पालना गर्नुपर्दछ:
ची / चाओ / चौ
यो एक छ --टाइल सीधा लगातार उस्तै सूट (Ojo, Ch चिपहरू ठीक, २ वा ips चिपहरूको कुनै सीढीहरू छैन)।
यो केवल गठन गर्न सकिन्छ:
बाँया खेलाडी खण्डनको साथ
वा भित्ताबाट लिएको टोकनको साथ।
अपवाद: यदि तपाइँ महजोंग प्राप्त गर्न केवल ची गर्न आवश्यक छ भने, तपाइँ यसलाई कुनै पनि खेलाडीले खारेज टुक्राको साथ गर्न सक्नुहुन्छ (यसलाई बाँयामा हुनु आवश्यक पर्दैन)।
यो एक संयोजन हो Matching मिल्दो टाइलहरू.
यो कुनै पनि खेलाडीको खारेजको साथ गठन गर्न सकिन्छ।
क Kong्ग / कांग
यदि तपाइँले उजागर गर्नुभयो पg्ग र तपाईं भित्ताबाट टोकन कोरे जस्तै पुgको बराबर, तपाईं पg्ग विस्तार गर्न र क a्ग बनाउन सक्नुहुन्छ। (Ojo, तपाईं अर्को खेलाडी खारेजको साथ यो तरीकाले क form्ग बनाउन सक्नुहुन्न। एकचोटि पg्ग उजागर भयो, यो केवल तपाईंले प्राप्त गरेको टोकनको साथ क Kong्गमा विस्तार गर्न सकिन्छ)।
यदि तपाईंको हातमा hand मिल्दो टाईलहरू छन् भने, तिनीहरूलाई क them्गको रूपमा गणना गर्न तपाईंले यो देखाउन आवश्यक छ। तपाईंले4टुक्राहरू अनुहार तल राख्नुपर्दछ (लुकेको हुँदै, यो के हो भनेर जान्दैन) र यसलाई क as्गको रूपमा घोषणा गर्नुहोस्। यो क Kong्ग, जहाँ to टोकन हातमा राखिएको थियो र टोकनहरू गाईन्छन तर देखाइएको छैन, भनिन्छ लुकेको क Kong.
खेल पालोमा लिन्छ, र सँधै समान दिशामा लिन्छ: काउन्टरक्लवाइज। अनुक्रम अनुसरण गर्नुहोस्: पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर-पूर्व -..., र यस्तै।
खेलको यो भावना सँधै पछ्याइन्छ, बाहेक जब आफ्नो खेलाडी नहुने खेलाडीले अर्को खेलाडीले पg्ग, क or्ग वा महजोंग बनाउन टाइल खेर फाल्नेछ।
त्यो अवस्थामा, अर्डर भ broken्ग भयो र त्यो प्लेयरको लागि खेल जारी रहनेछ, तर त्यसो भए यो अर्थमा फेरि जारी हुनेछ जुन हामीले त्यो प्लेयरबाट स indicated्केत गर्यौं।
उदाहरण को लागी, पूर्वी खेलाडीले टाईल फेंक्यो जुन वेस्ट प्लेयरले चाहान्छ। त्यस्तो अवस्थामा, भाव टुक्रिएको छ (किनकि यो दक्षिण खेलाडीको पालो हुनुपर्दछ), र खेल पश्चिमी खेलाडीले पछ्याउने थिए, जसले खारेज टाइल लिइसके पछि, उसले आफ्नो टाइलहरू मध्ये एउटा फाल्नेछ, र उत्तर उत्तर खेलाडीको लागि जारी रहनेछ। ।
चिप्स को वितरण पछि
एक पटक टोकन वितरित भएपछि, प्रत्येक खेलाडीले गरेको फूल र स्टेशन टोकनहरू, र सम्भावित क Kong्ग देखाउनु पर्छ (अर्डर पछ्याई)।
फूल र asonsतुहरू पहिले, त्यसपछि क are्ग देखाइन्छ।
पूर्व प्लेयरको साथ सुरू गरेर र खेलको दिशामा बढ्दै (पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर), खेलाडीहरूले उनीहरूसँग फ्लावर र सिजन टोकन घोषणा गर्छन्, तिनीहरूलाई अगाडि र दायाँ राखेर।
देखाईएको प्रत्येक फूल र shownतु टोकनमा, प्रत्येक खेलाडी भित्ताबाट नयाँ टोकन लिन्छ।
अतिरिक्त टोकनहरू जुन फूलहरू / asonsतुहरू वा क Kong्गको लागि भित्ताबाट लिइन्छ प्रतिस्थापन वा पूरक चिप्स। प्रतिस्थापन टोकन साइड बाट लिएका छन् भित्ताको अन्त। हाम्रो उदाहरणमा, निलो र color ब्लकको कारण।
यदि कुनै नयाँ टाईलहरू अर्को फ्लावर्स र सीजन टाइल हुन् भने, यो देखाइने छ र अर्को टाइल भित्ताको अन्त्यबाट लिइएको थियो, र यस्तै।
त्यहाँ कुनै बाध्यता छैन तुरून्त न त फूल / मौसम टाइल्स न क the देखाउन। तिनीहरू खेलको समयमा कुनै पनि समयमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ जबसम्म खेल समाप्त हुँदैन।
खेल सुरु गर्नुहोस्
खेल पूर्व खेलाडीले टाइल छोड्दा शुरू हुन्छ (याद गर्नुहोस् पूर्व १ 14 टाईलहरूबाट सुरू हुन्छ, जबकि बाँकी खेलाडीहरू १ with बाट सुरु हुन्छ)।
खेल सँधै बुझाइएको अनुभूतिको पछि विकसित हुन्छ, र केवल यो तोडिन्छ जब पाईन नभएको खेलाडीले पg्ग, क Kong्ग वा महजोंग बनाउन खारेज टाइल चाहान्छ। त्यसो भए फेरि खेलको समान भावना पछ्याएर त्यो खेलाडीको लागि फेरि जारी हुनेछ।
खेल समाप्त हुन्छ जब एक खेलाडीले माहजोंग वा भित्ता टाईलहरू समाप्त हुन्छ।
टोकन खारेज गर्नुहोस्
प्रत्येक पटक कुनै खेलाडीले टाइल छोड्दा, उनीहरूले आफ्नो स्थानको अगाडि यसलाई अगाडि राख्नुपर्दछ (र यो बाँकी खेलको लागि यो कसरी रहनेछ), क्रमबद्ध प r्क्तिमा t टाईलहरू (टेबलको मध्य भागमा पहिलो प row्क्ति र निम्न अधिक र अधिक) नजिक)
कुनै टोकन बोलाइएको छैन। केवल अन्य संयोजनहरू जुन अन्य खेलाडीहरू, फूलहरू / स्टेशनहरू वा मेकिंग माहजोंग (स्पष्ट रूपमा ची, पg्ग, क Kong्ग, फूल वा महजोंग / हू स indic्केत गर्दै) द्वारा खण्डित बनाइएका हुन्छन् भनेर ठूलो स्वरले भनिएको छ।
यदि एक खेलाडीले टोकन लिन चाहन्छ (र यसलाई लिन सक्दछ) उसले चाँडो नै यो खारेज हुने बित्तिकै भन्नुपर्दछ, यदि उसको पालो होईन भने पनि।
एक खारेज टाइल लिन सकिन्छ केवल एक संयोजन गठन गर्न, जो बाँकी खेलाडीहरु को अनुहार देखाउनु पर्छ।
ध्यान दिनुहोस्! तपाईं एक खारेज टाइल लिन सक्नुहुन्न, केवल जम्मा गर्न, एक खेल को गठन बिना।
एक पटक खारेज टाइल कसैले पनि लिदैन, यो बाँकी खेलको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन (त्यो हो, यदि पछि हामी खारेज टाईल हातहरूमा चासो लिन्छौं भने, हामी यसलाई लिन सक्षम हुनेछैनौं)।
प्रत्येक खारेज पछि
एक टोकन त्याग पछि, things वटा कुराहरु हुन सक्दछ:
एक खेलाडी अस्वीकृत टाइल प a्ग वा क Kong्ग पूर्ण गर्न चाहन्छ वा महजोंग गर्न चाहन्छ।
तपाईंले भन्नुभएको कुरा जतिसक्दो चाँडो तपाईं खारेज हुनुहुनेछ, यो तपाईंको पालो होईन भने पनि।
तपाईंले खेल यस्तो तरिकामा पर्दाफास गर्नु पर्दछ कि बाँकी खेलाडीहरू यो खेलको बाँकी समयमा देख्न सक्दछन्।
यस प्लेयरको लागि अब क्रमको क्रम जारी रहनेछ, जसले टोकन हाल्नु पर्छ।
¡Ojo, एक खारेज टाइल कोर्ने खेलाडी भित्ताबाट टाईल लिन सक्दैन! (क Kong्गले गरेको अपवादको साथ)
यदि उसले महजोंग गर्दछ भने, उसले चोरी गरेको टाइल छोड्छ जसमा उनी सुत्ने बन्द हुन्छ, जुन संयोजनको साथ उसले जीत गर्छ।
डिस्पेक्टरको दायाँ खेलाडीले टोकन ची बनाउँन चाहन्छ।
यो यत्ति चाँडो यसलाई खारेज हुनु पर्छ।
अन्त्यमा, खेलाडीले टाइल फ्याँक्नु पर्छ (याद गर्नुहोस्, एक खेलाडी जसले खारेज टाईल बनाउँदछ, भित्ताबाट लिदैन, यदि यसले क Kong्ग बनाउँछ भने)।
कुनै पनि खेलाडी टोकन चाहँदैन।
खारेज टाइल खेलको बाँकी भागको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
खेलको क्रममा अर्को खेलाडी भित्ताबाट टाइल लिन्छ र अर्को टाइल खारेज गर्नु पर्छ।
एक खारेज टाइल को लागी लडाई
यदि एक भन्दा बढि प्लेयरले उस्तै टोकन दाबी गर्छ भने, टोकन लिन प्राथमिकताको क्रम निम्नानुसार हुनेछ:
प्लेयर जो टोकन गर्न चाहन्छ माजोङ (o Hu).
खेलाडी को लागी जसलाई टोकन एक को लागी आवश्यक छ पg्ग वा एक काँग.
खेलाडी को लागी जो टोकन एक गठन गर्न चाहान्छ ची.
नोट: यदि दुई वा बढि खेलाडीहरू समान टाइललाई माहजोंग गर्न चाहन्छन् भने, खेलाडी जसले खेलको सामान्य अर्थमा पहिले उसलाई छुन्छ। केवल एक खेलाडीले जित्न सक्छ।
खारेज टाइलको चोरी
जब एक खेलाडीले टोकन अर्को द्वारा खारेज गर्दछ, उसले चोरीको टोकन ठोक्नु पर्छ, स्थिति राख्नुपर्दछ जसले गर्दा यो दर्शाउँछ कि कसले यसलाई दिएको हो।
उदाहरण को लागी, यदि एक खेलाडी एक टोकन ड्र द्वारा उसको बायाँपट्टि खेलाडी (बाँसको3वा डिस्कको 9), तपाईंले कोरिएको टोकन घुमाएर बायाँमा राख्नु भएको साथ संयोजन छोड्नु पर्छ:
यदि एक खेलाडीले टोकन ड्र अगाडी खेलाडी (डिस्कहरूको 9), तपाईले संयोजन छोड्नु पर्छ चोरीको टाइलको साथ हेर्नुहोस् र केन्द्रमा राखिएको छ।
यदि एक खेलाडीले टोकन ड्र दायाँपट्टि खेलाडी (डिस्क्सको 9), तपाईंले चिप चिप घुसाएर दायाँ राख्नु भयो।
अर्को खेलाडी द्वारा टोकन खारेजको साथ कोरिएको संयोजनको गठन पछि, त्यो संयोजन खेलको बाँकी खेलको लागि प्रदर्शनमा छोडिनु पर्छ। दायाँ भाग यो गठन गर्ने खेलाडी को।
त्यो हो, दुबै फूल / स्टेशनहरू र क Kong्ग, साथै खारेज टाईलहरूको संयोजनहरू, प्रत्येक खेलाडीको दायाँ बाँया।
पोइन्ट गणना गर्नुहोस्
यदि भित्तामा टाइलहरू रन आउट भयो र कसैले पनि जितेन भने खेल समाप्त भयो। यी प्रकारका खेलहरू भनिन्छ शून्य हात.
अर्कोतर्फ, यदि एक खेलाडीले महजोंग बनाउँदछ भने उसले आफ्ना सबै पोइन्टहरू ठूलो स्वरमा गणना गर्नुपर्दछ (फूलहरूको लागि बिन्दु पनि), प्रत्येक संयोजन वा टाइलका लागि खण्डित टाईलहरू लिईन्छ (प्रत्येक बिन्दुको लागि खारेज टाईल वा प्रत्येक १० बिन्दुमा टाइल) अस्वीकृत अनुहार तल)।
सबैभन्दा पहिले, प्रति प्ले पोइन्टहरू थपिएका छन्, यो स्पष्ट पार्न कि न्यूनतम points पोइन्ट पुगेको छ। त्यसपछि फूलहरूको लागि पोइन्ट थपिन्छ।
खाताको लागि पेन्सिल र कागज प्रयोग नगरी मेजमा गणनाहरू स्पष्ट पार्न यो गरिन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि एक खेलाडीले १२ अंक प्राप्त गरेका छन् (फूल बिन्दु गणना गरेर), उसले आफ्नो त्यागबाट १२ टोकन लिनु पर्छ:
उसले3टाइलहरू पनि लिन सक्दछ (१ अनुहार तल = १० पोइन्ट, २ अनुहार अप = १ पोइन्ट प्रत्येक)
नोट: एक पटक एक खेलाडीले महजोंग भने, अन्य खेलाडीहरूले आफ्नो टाइलहरू देखाउनु हुँदैन वा खण्डित टाईलहरू गडबडी गर्नु हुँदैन जबसम्म सबै पोइन्टहरू गणना गरीदैन।
एक पटक प्रत्येक खेल समाप्त भएपछि (कोही जीत भए पनि वा शून्य हात भएमा), हरेक खेलाडीसँग सम्बन्धित हावाहरू घुमाइन्छ (हावाहरू हो, खेलाडीहरू होइन, दौर समाप्त भएमा बाहेक)।
पूर्वका खेलाडीहरू उत्तर हुन्छन्, जुन दक्षिणी थियो त्यो पूर्व हुन्छ, पश्चिम दक्षिण र उत्तरमा पश्चिम बन्छ।
प्रत्येक राउन्डको अन्त्यमा
प्रत्येक राउन्डको अन्त्यमा, हावाहरूलाई घुमाउनुको साथसाथ, खेलाडीहरूको स्थितिमा पनि आदानप्रदान हुन्छ। यी सीट परिवर्तनको साथ अभिप्राय सुनिश्चित गर्नु हो कि प्रत्येक खेलाडी खेल मा अन्य खिलाडिहरु को बायाँ र दायाँ छ।
पूर्व वायुको गोलको अन्त्यमा र दक्षिण बतास को दौर सुरु गर्नु अघि, तिनीहरूको सीटहरू प्लेयर जो अब पुन पूर्वी हो र जो दक्षिण हुनेछ एक बीचको आदानप्रदान हुन्छ। पश्चिम र उत्तर खेलाडीहरूले पनि आफ्नो सिटहरू बदल्छन्।
दक्षिण बतास को गोल को अन्त मा र पश्चिम बतासको सुरू गर्नु अघि, जुन खेलाडी अहिले पूर्व हुनेछ पश्चिमको खेलाडीको सिटमा, दक्षिणबाट उत्तर खेलाडी, पश्चिममा खेलाडी दक्षिण र उत्तरमा पूर्वमा।
पश्चिम वायुको राउन्डको अन्त्यमा र उत्तर हावाको गोलो सुरु गर्नु अघि, आफ्नो सीटहरु पूर्वी हो जो खेलाडी र दक्षिण हुने एक बीच एक्सचेन्ज। त्यस्तै पश्चिमी र उत्तरका खेलाडीहरूले आफ्ना सिटहरू बदल्ने गर्छन्।
यो एकदम भ्रामक देखिन्छ (र यो हो), तर यस तरीकाले सबै खेलाडीहरूले आफ्ना विपक्षीहरूलाई बायाँ र दायाँबाट बदल्छन्, जसले गर्दा खेलको सुरूवातमा बतासको चित्रलाई समग्र खेलको लागि हाम्रा छिमेकीहरूलाई चिह्न लगाउन रोक्दछ।
नोट: सिट परिवर्तनहरू सहि तरिकाले गरिएको छ कि छैन भनेर जान्नको लागि एउटा तरिका हो कि हावाहरू चल्दा दक्षिण प्राप्त गर्ने खेलाडी दक्षिण राउन्डको सुरूमा पूर्व खेलाडी हुनुपर्छ। एक जो पश्चिम भयो पश्चिमको राउन्ड सुरू गर्ने क्रममा पूर्व हुनुपर्दछ, र जो उत्तर भयो उसले उत्तर राउन्ड सुरु गर्दा हुने थियो।
शुरुका फूलहरू देखाउनुहोस्
प्रत्येक खेलाडीले बदलीमा संकेत गर्नुपर्दछ कि उनीसँग फूलहरू छन् ("फ्लावर" वा "फ्लावर" बोलाएर) वा कुनै फूल छैन ("मसँग छैन", "मसँग फूल छैन" वा "कुनै फूल" छैन)। भित्ताको अन्त्यमा फूल टोकनहरू लिइसकेपछि, प्रत्येक खेलाडीले बोलाउनु पर्छ कि उनीहरूसँग थप फूलहरू छैनन् ("अब थप फूलहरू" वा "अब थप फूलहरू")।
खेलाडी Este उनीसँग फ्लावर्स एण्ड सीजन टोकन छ, त्यसैले उसले यसलाई दायाँ छोड्दै देखाउँनेछ र भित्ताको अन्त्यबाट अर्को टोकन लिनेछ (उसले डिस्कको5प्राप्त गर्दछ)। एक पटक पूरक टोकन लिइसकेपछि, पूर्वी खेलाडीले चर्को स्वरमा भन्नु पर्छ कि ऊसँग अझ फूलहरू छैनन्।
जब यो खेलाडी पालो थियो मा मैले ठूलो स्वरले भन्नु पर्छ कि यसमा कुनै फूल छैन।
पूर्वमा जस्तै, खेलाडी पश्चिम, यसमा फूल र मौसम टोकन छ (यसमा २ फूल टोकनहरू छन्), र भित्ताबाट अतिरिक्त टाईलहरू लिदा, वर्णहरूको २ को दुई समान टाइलहरू बाहिर आउँदछन्। प्रतिस्थापन टाइलहरू चित्रण गरेपछि, पश्चिमले भन्दछ कि यसमा थप फूलहरू छैनन्।
त्यसो भए यो खेलाडीको पालो हुनेछ उत्तर। यसको पनि कुनै फूलहरू छैनन्, त्यसैले म ठूलो स्वरले भन्दछु कि यसमा कुनै फूलहरू छैनन्।
ईस्ट प्लेयर टाइल छोड्ने पहिलो हो। पूर्वी खेलाडीले बाँसको टोकन ls रोल्दछ, यसलाई उसको अगाडि राख्दै:
किनकिbबाँस टोकन दक्षिण खेलाडीले चाहेको हो र अरू कसैले यसलाई अनुरोध गर्दैन, उसले यसलाई लिन्छ र ची (बाँस्को २- 3-2--3) बनाउँछ, यसलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि छोड्दछ र बाँसको with सँगै छोडिन्छ (छोड्दै बायाँको टोकनले संकेत गर्दछ कि यो खेलाडी उसको बायाँ, पूर्व, जसले यसलाई फ्याक गरेको थियो)।
दक्षिणले छोड्दा यो भित्ताबाट चोरी गर्न सक्दैन। अब उसले टोकन खारेज गर्नुपर्छ, र सर्कलको9रोल गर्नुहोस्।
यद्यपि, सर्कल टोकनको उत्तरी खेलाडीको लागि क form्ग निर्माण गर्न रुचि राख्छ। तसर्थ, वेस्ट खेलाडीको पालो छोडिनेछ, र उत्तर खेलाडीले आफ्नो चाल देखाउँनेछ (उसले यो क show देखाउनु पर्छ, किनकि यो लुकेको छैन), जुन बाँस's को एक संयोजनको मध्यमा घुम्छ (किनभने उसले त्यसलाई फ्याकेको छ। उसको अगाडि खेलाडी, दक्षिण) र पर्खालको अन्त्यबाट अतिरिक्त टुक्राहरू लिने छ (क Kong्ग बने पछि, पर्खालको अन्तबाट अतिरिक्त टुक्रा कोरिएको हुनुपर्छ)। उसले चरित्रको9पाउँदछ।
यद्यपि यो उत्तरको खेलाडीलाई टोकन फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ, तर उसले लुकेको क Kong्ग प्रकट गर्ने निर्णय गर्दछ (त्यसैले उसले to टोकन अनुहार फेर्दछ) र अर्को थप टोकन लिन्छ।
भित्ताबाट उनको टोकन लिए पछि (उनी सर्कलको १ प्राप्त गर्दछ), उत्तरी खेलाडीले टोकन खारेज गर्नु पर्छ, जुन पछि कसैलाई चासो लाग्दैन भने, पूर्वी खेलाडीले भित्ताबाट टोकन लिएर खेल्ने थियो, र यस्तै। खेल समाप्त भयो जब एक खेलाडीले महजोंग बनाउँछ वा सबै टाईलहरू प्रयोग भएको छ (कुनै हात छैन)।
नाटक र तिनीहरूको स्कोर
आरसीएममा 81१ नाटकहरू छन्, १ पोइन्टबाट points 1 अ .्कसम्म। ती आवश्यक छन् 8 बिन्दुहरू महजोंग गर्न सक्षम हुन।
यदि एक खेलाडीले अर्को द्वारा खारेज चिपको साथ बन्द गर्दछ भने, उसले आफ्नो हातको स्कोर त्यस खेलाडीबाट प्राप्त गर्दछ, साथै सबै खेलाडीहरूबाट extra अतिरिक्त बिन्दुहरू (चिप फ्याँक्ने एक सहित) बाट बन्द हुन्छ।
यदि उसले भित्ताबाट कोरिएको टाइललाई बन्द गर्छ भने, उसले आफ्नो हात स्कोरमा points पोइन्ट थप गर्दछ र amount विपक्षीहरू मध्ये प्रत्येकबाट त्यो रकम प्राप्त गर्दछ।
खारेज गर्नुहोस् विजेता पोइन्ट्स +। -
सबै - विजेता पोइन्ट्स +।
नाटकहरूको संयोजनमा सामान्य सिद्धान्तहरू
जब चाललाई अर्को समावेश नगरी गर्न सकिन्न, पहिले नै समावेश गरिएको चाललाई अ be्कित गरिने छैन।
सिद्धान्त बहिष्करण वा खेलको बारम्बार प्रयोगको निषेध
यदि दुई वा तीन संयोजनहरू चालको रूपमा प्रयोग गरियो भने यी अधिकतम संयोजनहरू अधिकतम अन्य संयोजनहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ र नयाँ चाल बनाउँदछ।
तिनीहरूलाई थप्न सकिन्छ: दुई शुद्ध बाँसको अन्त्य चिसका लागि १ पोइन्ट, दुई शुद्ध चरित्र अन्त्य चिसका लागि १ बिन्दु र मिश्रित डबल चाउ (बाँसको १-२--1 र वर्णको १-२-।) को लागी १ पोइन्ट। बाँसको --1-and र वर्णहरूको --1-use प्रयोग गर्न फेरि सम्भव हुने छैन मिश्रित डबल चाउले अर्को बिन्दुको लागि, किनकि हामीले दुई शुद्ध टर्मिनल (१-२) नाटकको संयोजन प्रयोग गरिसकेका छौं। -1, दुबै बाँस र पात्रहरूका लागि)।
लुकाइएको हात समावेश नाटक
प्रकृतिबाट लुकेका नाटकहरूमा, प्वाइन्ट हिपको लागि पोइन्ट्स थप गरिदैन, यद्यपि तिनीहरू पूर्ण रूपमा लुकेको ह्यान्डसँग मिल्दछन्।
यी नाटकहरू: कम सम्मानका साथ टाँचे गए चिप्स, ठूलो सम्मानका साथ स्टिच गरिएको चिप्स, P जोडी, Hidden लुकेका पg्ग, नौ गेटहरू, Con लगातार शुद्ध जोडी र १ Or अनाथहरू।
क Kong्ग संयोजनहरू
दुई एक्सपोज्ड क Kong्ग4अंकको लायक छ।
लुकेको क Kong्गको साथ मिलेको एक्स्पोज्ड क Kong6पोइन्टको लायक हुन्छ।
दुई लुकेको क Kong 8 अ points्कको लायक छ।
१ पोइन्ट नाटकहरू
१. समान डबल ची
एउटै सूटको दुई भर्या। र उही संख्या अनुक्रम।
२. डबल मिश्रित ची
दुई भिन्नै सूटको दुई भर्या ,्हरू, तर समान संख्या अनुक्रम।
Short. छोटो सीढी
लगातार संख्या अनुक्रमको साथ समान सूटको दुई Chis।
Two. दुई शुद्ध टर्मिनल Chis
१-२--1 र उही सूटको ---- of को सीढीहरू।
Ter. टर्मिनल वा वायुहरूको प Pun्ग
टर्मिनलहरूको एक प containing्ग समावेश गर्ने हात (काउन्टर १ र Wind) वा वायुहरू, या त आफ्नै पवन वा डोमिनन्ट विंड (राउन्डको हावा) बाहेक।
Kong. क Kong्ग खुल्यो
क Kong्ग एक त्यागिएको टोकनबाट वा पहिले नै प्रदर्शित पg्गमा टोकन थप्नबाट प्राप्त गरियो। नोट: पर्दा प्ग विस्तार गर्न को लागी तान्न सकिदैन।
Ab. अनुपस्थित परिवार
एक हात जहाँ सूट को types प्रकार को १ को लागी कुनै चिपहरु छैनन्। त्यो भन्नु हो, केवल २ सूटको साथ हात। यो सम्मान गर्न सक्छ।
No. सम्मान छैन
एक हात सूट टोकनबाट मात्र बनेको छ, कुनै सम्मान टोकनको साथ। त्यो हो, त्यहाँ कुनै हावा वा ड्रागन छैनन्।
Ge। किनारा कुर्नुहोस्
एक or वा3को लागी एक ची गठन गर्न 7-1 वा--2 संग। यो हात मान्य हुँदैन जब कुनै पनि अन्य प्रकारको प्रतिक्षाको साथ मिलाइन्छ (उदाहरणका लागि, --8- ch-- चिप्सको साथ बन्द हुन कुञ्जीलाई एज प्रतीक्षा र साधारण प्रतिक्षाको संयोजन मानिन्छ, किनकि यो मान्न सकिन्छ कि9--7- the वा जोडी 7-8 बनाउने छ।
नोट: होल्ड पोइन्टहरू मात्र दिइन्छ जब एकल टोकन आवश्यक पर्दछ।
उदाहरण को लागी, केवल एक बाँस with को साथ बन्द गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्दै:
१०. प्रतीक्षा गर्नुहोस् बन्द
बन्द प्रतीक्षाको साथ बन्द गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, २--2 भएको र for को लागि पर्खँदै)। यो हात मान्य छैन जब कुनै पनि अन्य प्रकारको प्रतिक्षाको साथ जोडीएको छ (उदाहरण को लागी, २-२-२--4 चिप्सको साथ बन्द हुन कुञ्जी कुर्नु र साधारण प्रतिक्षाको संयोजन मानिन्छ, किनकि ती दुबै serve र दुवै सेवा गर्दछन। a)। जहाँसम्म, प्रतिक्षामा संयोजन (उदाहरणका लागि, 3-2-2---। र2को लागि प्रतीक्षालाई एज प्रतीक्षा र बन्द प्रतीक्षाको संयोजन मानिन्छ, तर केवल to टोकन बन्द गर्दछ।
उदाहरण को लागी, यदि यो सर्कलको with सँग मात्र बन्द गर्न सकिन्छ:
११. साधारण प्रतीक्षा गर्नुहोस्
जोडी बनाउने कार्डको साथ बन्द गर्नुहोस्। यो चाल मान्य हुँदैन जब कुनै पनि अन्य प्रकारको प्रतिक्षाको साथ जोडीएको छ (उदाहरण को लागी, २-२-२--2 चिप्सको साथ बन्द हुने कुर्सी बन्द प्रतीक्षा र साधारण प्रतिक्षाको संयोजन मानिन्छ, किनकि ती दुबै serve र दुवै सेवा गर्दछन। a)। यो स्वीकार्य पनि छैन यदि दुई विकल्पहरू जोडीसँग बन्द हुने आशा गरिन्छ (उदाहरणका लागि 2--2-4-। र or वा3को आशा गर्नुहोस्)।
१२. भित्ता बन्द गर्नुहोस्
भित्ताबाट समातिएको टोकनको साथ बन्द गर्नुहोस्।
१.. फूल र Tokतु टोकन
प्रत्येक फूलको मूल्य १ पोइन्ट हुन्छ। ती सबै बिन्दुहरूको योगको अन्तमा गणना गरिन्छ। तिनीहरूले कम से कम points अ of्कको स्कोर प्रदान गर्दैनन्। तिनीहरू जब तपाईं चाहानुहुन्छ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। तिनीहरू दायाँपट्टि बाँकी छन् (बाकी चालहरू र खुला टाइलहरू जस्तै) र नयाँ टाइल भित्ताको अन्त्यबाट लिइएको हो। यदि प्लेयर नयाँ टोकनको साथ बन्द हुन्छ भने, भित्ता बन्द गर्नको लागि पोइन्ट थपिन्छ।
१.. ड्र्यागनको पg्ग
ड्र्यागनको पg्ग (वा क Kong्ग)। यो लुकाउन वा उजागर गर्न सकिन्छ।
१.. प्रमुख हावा पg्ग
शक्तिशाली हावाको पg्ग (वा क Kong्ग), जुन राउन्डको हावासँग मिल्छ। यो लुकाउन वा देखाउन सकिन्छ।
१ Wind. आफ्नै पन्ड प्ग
आफ्नै हावाको पg्ग (वा क Kong्ग) यो लुकाउन वा देखाउन सकिन्छ।
१ Hidden. लुकेको हात
सबै संयोजनहरू लुकाइएको छ र अस्वीकृत टाइलको साथ बन्द छ।
१ Ch. सबै चि
एक हात जो केवल चीसको समावेश गर्दछ र कुनै सम्मान छैन।
19. होर्डेड ट्याब
दिईएको टाइलका t टाइलहरू प्रयोग गर्नुहोस्, यसलाई क dec्गको घोषणा नगरी (जुन अन्य चालहरू बनाउन यसको प्रयोग गर्दै)। लुकाइएको वा खुलासा गरिएको क Kong्ग होर्ड टोकनको रूपमा गणना गर्दैन।
२०. मिश्रित डबल पg्ग
हातले उहि संख्याको दुई पg वा क Kong्ग समावेश गर्दछ (तर स्पष्ट रूपमा फरक सूटहरू)।
२१. दुई हिडन पg्ग
हातले दुई पgs्गहरू समावेश गर्दछ जुन खुलाइएको छैन (जुन, खारेज चिप्सले बनेको छैन)। लुकेको क Kong लुकेको प hidden्गको लायक छैन।
२२. लुकेको क Kong्ग
Matching मिल्दो टाईलहरू समावेश भएको हात, जसमध्ये कुनै पनि छोड्ने छैन, र जुन क Kong्ग घोषित गरिएको छ। सबै टाईलहरू अनुहार तल झर्छन्।
२.. सबै सरल
टर्मिनल टोकन वा ऑनर टोकन बिना हात। हातमा सबै चिप्स सरल छन् (चिप्स २-2)।
२.. टर्मिनल र सम्मान को नवीकरण हात (सबै सम्मान र / वा टर्मिनल संग)
हातले कम्तिमा एउटा टर्मिनल टाइल वा प्रत्येक संयोजनमा एक सम्मान, जोडी सहित समावेश गर्दछ।
25. पूर्ण रूपमा लुकेको हात
हातले जोडी सहित भित्ताबाट बनाइएको सबै टाइलहरू पूरा गर्यो।
२ Kong. दुई क Kong्ग देखियो
हातले दुई क Kong्ग प्रदर्शित समावेश गर्दछ।
२.. अन्तिम ट्याब
एक त्यागिएको टाइलसँग बन्द गर्नुहोस् जुन त्यस प्रकारको अन्तिम बायाँ हो (उदाहरणका लागि यदि तिनीहरू पहिले नै भएको थियो भने
खारेज वा अन्य खेलाडीहरू द्वारा पर्दाफास संयोजनमा बाँसको of को pieces टुक्रामा, बाँसको piece को अन्तिम टुक्राको नजिक)। क Kong्ग रोबोसँग मिल्दैन।
२ Pun. सबै पg्ग
4 पg्ग (वा क Kong्ग) र जोडीले हात मिलाएको छ।
२।। सेमीपुरा हात (सम्मानका साथ शुद्ध हात)
हन्डर्स चिप्सको साथ संयोजनमा, तीन सूटमध्ये केवल एउटाबाट चिपहरू समावेश गर्दै।
.०. तीन आश्चर्यजनक मिश्रित चुटकुले
एक हातले तीन सूटको तीन चिस समावेश गर्दछ, र जसको सुरू चिप्स एक चरणको आरोहण अन्तरालमा छन्।
सबै परिवार र सम्मान
संयोजनहरू द्वारा बनाईएको हात जुन खेलमा types प्रकारका टोकन देखा पर्दछ। तीन सूट: क्यारेक्टर, डिस्क, बाँस, प्लस वायु र ड्र्यागन।
एक हात जहाँ प्रत्येक संयोजन पूरा गरीयो चिप्स जोडी सहित अन्य खेलाडीहरू द्वारा छोडिन्छ। प्रतिक्षा पोइन्टको साथ जोडी सकिन्छ।
हातले ड्र्यागनको दुई पg्ग (वा क Kong्ग) समावेश गर्दछ।
34. दुई लुकेका क Kong्ग
एक हातले दुई क Kong्ग समावेश गर्दछ जुन खुलाइएको छैन।
। 35. मिश्रित भर्या।
एक सीधा (१ देखि from सम्मका टाइलहरू) तीन सूटको चीस द्वारा गठन गरिएको। तोडो ची संग जोडी गर्न सकिन्छ।
। 36. ऐना
टाईलहरू सँग मिलेर बनेको टाइलहरू जुन ठाडो सममितीय हुन्छ (जसमा ती टाइलहरू जो एकै अनुहार माथि र अनुहार तल हेर्दछन्: १, २,,,,,,,,, Disc डिस्कहरूको, २,,,,, 1, 2) , Ú, of Bambúes र व्हाइट ड्र्यागन को)। अनुपस्थित परिवारका लागि पोइन्ट समावेश छ।
। 37. ट्रिपल ची मिश्रित
तीन बराबर Chis, तर फरक सूटको साथ एक हात।
। 38. तीन मिश्रित स्तब्ध प Pun्ग
हातले तीन पg वा क Kong्ग समावेश गर्दछ, प्रत्येक बिभिन्न सूटको र अघिल्लो प greater्ग भन्दा ठूलो नम्बर।
एक हात जोसँग कुनै पोइन्ट छैन। फूलहरूको लागि पोइन्टहरू यस स्कोरमा गणना हुँदैन। फूलहरू जीतको लागि points पोइन्ट पछि थपिन्छन्।
बन्द गर्दै, उदाहरणका लागि, बाँसको of को खारेजको साथ (the को अन्तिम भाग होइन), र न त लुकाइएको हात हो न त हात नै हात। यसैले यो पूरा भयो कि यो न त सबै चि, न सबै प Pun्ग नै हो, त्यहाँ कुर्नु पर्ने कुनै पोइन्ट छैन, न टर्मिनल वा ऑनरको, न त अन्तिम टोकन आदि।
.०. भित्ताको अन्तिम ट्याब
भित्तामा अन्तिम टाइलको साथ बन्द गर्नुहोस्। बन्द दीवारको साथ जोडी गर्न सकिदैन।
.१. भित्ताको अन्तिम टोकन खारेज गर्नुहोस्
भित्ताको अन्तिम टाइलको खारेजको साथ बन्द गर्नुहोस्।
.२. अतिरिक्त क Kong्ग टोकनको साथ बन्द गर्नुहोस्
एक क obtain्ग प्राप्त गरे पछि लिईएको अतिरिक्त टोकनको साथ बन्द गर्नुहोस्।
। 43. क Kong्ग डकैती
एक चोरी भएको टोकनसँगै बन्द गर्नुहोस् जुन एक खेलाडीसँग जुन उसले पर्दा .्ग प from्गबाट ​​क Kong्गमा लाग्यो। पूर्ण रूपमा लुकाइएको हातसँग मिल्दैन।
44. टोकन केही सम्मान संग टाँसिएको
तलका टाईल्सबाट बनाइएको हात: or वा st स्टिच टाईल्सको सबसेटको साथ or वा Hon ऑनर (जोडा बनाइएको छैन)। Hon ऑनर टोकनको साथ, खेललाई ग्रेट ऑनर्सका साथ सिवन टोकनहरू भनिन्छ। हात लुकाउनुपर्दछ, यद्यपि यो पूर्ण रूपमा लुकेको हुनुपर्दैन, भनेको छ, परित्याग गरिएको टाइल बन्द गर्न को लागी तान्न सकिन्छ। सबै परिवारहरू वा लुकाइएको हातसँग मिल्दैन।
45 सिलाई टोकनहरू
एक खेलको चिप्स १--1-4, अर्को सूटको २--7-2 र तेस्रो सूटको -5--8-3 सम्मको विशेष खेल। हात लुकाउनु पर्दैन (स्पष्टतः चौथो संयोजनको लागि बन्द नगरीकन छाड्न सकिन्छ, सिलाइएको टाईलहरूको लागि होइन)। तोडो ची संग जोडी गर्न सकिन्छ।
एक हात जसमा चिप्स through देखि 6. सम्म मात्र हुन्छ
। 47. तल्लो 4
एक हात जसमा चिप्स through देखि 1. सम्म मात्र हुन्छ
। 48. तीन ठूला बतासहरू
हातले Wind वान पg वा क Kong समावेश गर्दछ।
49. शुद्ध सीढी
एक समान सूटको चिप्सको १-1 सिधा बनाई हातले लगातार is लगातार चिस गठन गर्दछ।
.०. चरम परिवारको Chis
हात एक सूट को Ch 1-2 3-7 र 8-9-1, अर्को सूट Chows 2-3-7 र 8-9-5 र बाँकी तेस्रो सूट को of को जोडी समावेश गर्दछ। मिश्रित डबल ची, दुई टर्मिनल चीस, सम्मान छैन र सबै ची को लागी अंकहरु पहिले नै शामिल गरीएको छ।
.१. तीन शुद्ध चरण Chis
एउटै सूटको तीन चिसले बनाएको हात, प्रत्येक शुरुवातको टुक्राको साथ शुरू हुन्छ जुन अघिल्लो चीको सुरूवाती टुक्राहरू भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढि शुरू हुन्छ, तर दुबैको मिश्रण होइन (त्यो हो, वा तीन चिस सुरुवाती टुक्राहरूसँगै छन्) एक वा सबै तीन चिसको अन्तराल दुईको अन्तरालमा हुन्छ)।
.२. सबै साथ।
एक हात जहाँ प्रत्येक संयोजनमा includes (जोडी सहित) समावेश गर्दछ।
। 53. मिश्रित ट्रिपल पg्ग
तीन बराबर पg्ग (वा क Kong्ग) को साथ हात, तर प्रत्येक फरक सूट।
। 54. तीन हिडन पg्ग
हातले तीन अघोषित पgs्गहरू समावेश गर्दछ (लुकाइएको क Kong गणना गरिएको छैन)।
। 55. सात जोडी
हातले सात जोडी चिपहरू मिलेर बनेको छ। यो सँधै एक साधारण प्रतीक्षाको साथ समाप्त हुन्छ। एक खारेज टाइल खेल समाप्त गर्न को लागी तान्न सकिन्छ। सबै (पg्गको) जोडी, लुकाइएको हात, वा साधारण होल्ड हातहरूसँग जोड्न सकिदैन। सबै परिवारहरू, पूर्ण रूपमा लुकाइएको हात, होर्डेड टोकन, सम्मान छैन, सबै साधारण, १ परिवार हराएको, सबै टर्मिनलहरू वा सबै सम्मानहरूको साथ संयोजन गर्न सकिन्छ।
। 56. टोकन महान सम्मान संग टाँसिएको
सात सम्मानका प्रत्येकले बनाएको हात (पुनरावृत्ति बिना) र तीन सिटबाट टाईलहरू जसले सात सिलाई टाईल्सको अनुक्रम बनाउँदछ (जुन, टाढा टाईल्सको हात बनाउने नौवटा मध्ये कुनै सात टाईलहरू भएको: टाईल्स १- एक सूटको --1, अर्को सूटको २--4-7 र तेस्रो सूटको -2--5-8)। हात लुकाउनुपर्दछ। हातहरूसँग मिल्दैन: सबै परिवारहरू, लुकेका हातहरू, वा साधारण प्रतीक्षा।
। 57. सबै साथीहरू (सबै प Pe्ग साथीहरू)
हात जोडी प t्ग द्वारा पनि बनाइएको (जोडी सहित)। सबै पg्गका लागि पोइन्ट, कुनै सम्मान र सबै साधारण पहिले नै समावेश गरीएको छ। यो अनुपस्थित परिवार वा शुद्ध हात संग जोडी गर्न सकिन्छ।
हातमा समान सूटको र पूर्ण सम्मानको बिना नै पूरै समावेश हुन्छ। No Honers Hand बाट पोइन्ट्स सामेल छन्।
।।। समान ट्रिपल ची
तीन बराबर चीस र समान सूटको। शुद्ध लगातार पg्ग हातसँग जोड्न सकिदैन।
.०. तीन Pung लगातार शुद्ध
एउटै सूटको तीन पg्ग (वा क Kong्ग) सँग हात, प्रत्येक अन्तिम भन्दा एक एकाई भन्दा ठूलो संख्याको साथ। ट्रिपल ची आइडेंटिकल सँग मिल्दैन।
.१. शीर्ष ट्याबहरू
टाइल 7, and र ((जोडी सहित) को संयोजन सहितको हात। सम्मानका लागि अंकहरू सामेल छन्। यो सबै पg्ग, अनुपस्थित परिवार वा शुद्ध हातसँग मिल्दछ।
.२. केन्द्रीय ट्याबहरू
टाइल 4, and र ((जोडी सहित) को संयोजन सहितको हात। सम्मानका लागि अंकहरू सामेल छन्। यो सबै पg्ग, अनुपस्थित परिवार वा शुद्ध हातसँग मिल्दछ।
। 63. तल्लो ट्याबहरू
टाइल 1, and र ((जोडी सहित) को संयोजन सहितको हात। सम्मानका लागि अंकहरू सामेल छन्। यो सबै पg्ग, अनुपस्थित परिवार वा शुद्ध हातसँग मिल्दछ।
। 64. चार शुद्ध कदम Chis
उही सूटको चार चीसको हात, सुरूवातका टुक्राहरूसहित प्रत्येकले अघिल्लो चीको सुरूवातको टुक्राको सन्दर्भमा एक वा दुई नम्बरहरू स्टगेर गर्‍यो।
65. तीन क Kong्ग
एक हातले तीन क includes्ग समावेश गर्दछ। तिनीहरू लुकाउन वा देखाउन सकिन्छ।
सबै सम्मान र टर्मिनल
टर्मिनलहरू (काउन्टर १ र)) र ऑनर्स (बतास र ड्रैगन) को पूर्ण रूपमा हात रहेको। हावा र टर्मिनलको आधारभूत नाटकहरूको लागि कुनै थप पोइन्टहरू अनुमति दिईएन। सबै पg्ग, टर्मिनल पg र सम्मान प Pun्गका लागि पोइन्टहरू समावेश छन्। यो अर्ध शुद्ध हात, अनुपस्थित परिवार, दुई ड्र्यागन, तीन सानो ड्रैगन, तीन महान ड्रैगन, तीन हावा, चार सानो हावा वा चार ठूलो बतास संग मिल्दछ।
हात समान सूटको चार बराबर Chis द्वारा बनाईएको। शुद्ध Staggered Pung, होर्ड टोकन र शुद्ध डबल ची को लागी अंकहरु शामिल छन्।
P 68. चार शुद्ध लगातार Pungs
एक हातले चारै प or्ग वा उही सूटको को includes्ग समावेश गर्दछ, एक द्वारा स्थिर।
.०. चार सानो हावा
हात जसमा तीन प (्ग (वा क )्ग) हावा र बाँकी बतासको एक जोडी सामेल छ। यो प्रबल हावा र आफ्नै हावाको साथ मिल्दछ। तीन ठूलो बतास बिन्दुहरू समावेश छन्।
Little१. तीन सानो ड्र्यागन
एक हातले दुई ड्रg्ग्स (वा क )्ग) को प includes्ग, र अन्य ड्र्यागनको एक जोडी समावेश गर्दछ। व्यक्तिगत ड्र्यागनको प्रति Pung पोइन्ट गणना गरिएको छैन।
हात पूर्ण रूपमा सम्मानहरू (हावाहरू र / वा ड्रेगनहरू) बाट बनाइएको हो। यो पg वा क Kong्ग संग गठन गर्न सकिन्छ, लुकाइएको वा देखाइएको। ड्र्यागन पg्गको साथ संयोजन गर्न सकिन्छ। टोडो पg्ग पोइन्टहरू समावेश छन्।
। 73. चार लुकेका पg्ग (लुकाइएको खजाना)
हातले चार अप्रभावित पg्ग (वा क Kong्ग) समावेश गर्दछ। पूर्ण रूपमा लुकाइएको हात वा सबै पg्गको साथ जोड्ने सकिदैन।
। 74. शुद्ध चरम Chis
दुई तल्लो चिस (१-२--1), दुई माथिल्लो चिस (--2-)) र of को जोडी, सबै समान सूटबाट बनेको हात। शुद्ध हातका लागि पोइन्ट, सात जोडी, टर्मिनेटिows चाउ र शुद्ध डबल चाउ समावेश छ।
Great 75. चार महान बतास
चार वायुहरूको पg्ग (वा क Kong्ग) द्वारा बनेको हात। सबै पg्ग वा प्रमुख वायु वा सेल्फ पवन पg्गको साथ जोड्ने सकिदैन।
। 76. तीन महान ड्र्यागन
हात Dra ड्रैगनको पg्ग (वा क Kong्ग) द्वारा गठन गरिएको। ड्र्यागन पg्गको साथ संयोजन गर्न सकिदैन।
हात २,,,,,,, B बाँस टाइल र वैकल्पिक रूपमा ग्रीन ड्रैगन बाट बनेको छ। यो शुद्ध हात, अर्ध शुद्ध हात (यदि हरित ड्रैगन प्रयोग गरिएको छ), P जोडीहरू, पूर्ण रूपमा लुकाइएको हात, सबै पg्ग वा सबै सरलसँग जोडियो सकिन्छ।
। 78. नौ ढोका
एक समान सूटको चिपहरू १-११-२--1--1--1--2-3-4-5-----formed formed बाट गठन गरिएको, तिनीहरू मध्ये कुनैको पनि जोडी बनाउँदै। हात लुकाउनुपर्दछ। हिडन ह्यान्ड, शुद्ध हात, वा टर्मिनलहरू र सम्मान पg्गको साथ जोडी गर्न सकिदैन। पूर्ण रूपमा हातले मिलाउन सकिन्छ।
।।। चार क Kong्ग
Kong क Kong्गको साथ कुनै पनि हात। ती लुकाउन वा उजागर गर्न सकिन्छ।
.०. सात शुद्ध लगातार जोडीहरू
हात उही सूटको सात जोडी चिप्स द्वारा बनाईएको संख्या जसको संख्या एक द्वारा staggered छ। यो शुद्ध हात, पूर्ण रूपमा लुकाइएको हात वा साधारण प्रतीक्षाको साथ जोडी गर्न सकिदैन।
.१. तेह्र अनाथ
बांसको टाइल १ र,, डिस्कहरूको १ र,, वर्णहरूको १ र,, र सात सम्मानहरू प्रत्येकको साथ हात मिलाइयो। जोडी कुनै पनि चिप्सले बनेको हो। एक खारेज टाइल खेल समाप्त गर्न को लागी तान्न सकिन्छ। यो शुद्ध हात, पूर्ण रूपमा लुकाइएको हात वा साधारण प्रतीक्षाको साथ जोडी गर्न सकिदैन।
Fouls र दण्डहरु
यदि एक खेलाडीले ची, पg्ग, क Kong्ग घोषणा गर्दा वा प्रतिस्थापन टोकन लिँदा गल्ती गर्छ भने, उसले खेल जित्ने अधिकार गुमाउँछ (मृत हात), यद्यपि तपाईं प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, छोड चोरीहरू, आदि।
विचार परिवर्तन गर्नुहोस्
खेलाडीहरूले रद्द गर्न अनुरोध गर्न सक्दैन र त्यसपछि आफ्नो बिचार बदल्न सक्दैन। पहिलो पटक तपाईंलाई सूचित गरिनेछ, दोस्रो पटक यो हुनेछ दण्डित con5बिन्दुहरू (प्रत्येक खेलाडीलाई भुक्तानी गर्न), तेस्रो 10 बिन्दुहरू, चौथो 20 बिन्दुहरू, र यस्तै।
अघिल्लो खेलाडी खारेज हुनु अघि भित्ता टाइललाई छुनु गाह्रो मानिन्छ। पहिलो पटक तपाईंलाई सूचित गरिनेछ, दोस्रो पटक यो हुनेछ दण्डित con5बिन्दुहरू (प्रत्येक खेलाडीलाई भुक्तानी गर्न), तेस्रो 10 बिन्दुहरू, चौथो 20 बिन्दुहरू, र यस्तै।
यदि टोकन देखिएन भने, यो जहाँ छोडियो त्यही छोडिनेछ। यदि टोकन देखियो भने, प्लेयर त्यो खेल जित्न सक्षम हुनेछैन (मृत हात), यद्यपि तपाईं प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, छोड चोरीहरू, आदि।
ढिलाइ संग पg्ग को लागी सोध्नुहोस्
एक भन्दा बढि प Pun्गको लागि टोकन अनुरोध गर्नुहोस्3सेकेन्ड ढिलो गल्ती मानिन्छ। पहिलो पटक तपाईंलाई सूचित गरिनेछ, दोस्रो पटक यो हुनेछ दण्डित con5बिन्दुहरू (प्रत्येक खेलाडीलाई भुक्तानी गर्न), तेस्रो 10 बिन्दुहरू, चौथो 20 बिन्दुहरू, र यस्तै।
झूटा महजोंग (गलत हू)
यदि खेलाडी संग छ points पोइन्ट भन्दा कम तिर्नै पर्छ 10 बिन्दुहरू प्रत्येक खेलाडीलाई र हुनेछ मृत हात, यद्यपि ऊ खेलिरहेको हुन सक्छ, छाडा छोड्न, आदि।
यदि खेलाडी आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन एक महँगोमा बनाउन को लागी एक महँगो बनाउन (तपाइँसंग १ 14 भन्दा बढी टाईल्स वा १ 14 भन्दा कम छ, टाइल संग गल्ती गर्नुहोस् कि बन्द, आदि), तपाइँ तिर्न पर्छ 20 बिन्दुहरू प्रत्येक खेलाडीलाई र हुनेछ मृत हात, यद्यपि ऊ खेलिरहेको हुन सक्छ, छाडा छोड्न, आदि।
साथै, सबै चिप्स देखाईयो झूटा महजोंगको घोषणाकर्ता द्वारा खारेज हुनुपर्दछ निम्न प्लेयर मा बदल्छ।
सबै ट्याब देखाइयो एक खेलाडी द्वारा (यो भित्ताबाट चोरी गर्दा गिरन्छ, यसलाई आफ्नो हातमा चिप्स बीच फाल्छ, आदि।) खारेज हुनुपर्दछ प्लेयरको अर्को पालोमा।
घटनामा कि एक खेलाडी तपाईका सबै चिप्स देखाउनुहोस् जब अर्को खेलाडीले महजोंग घोषणा गर्दा ऊ मूर्ख छ। यदि अन्तमा खेलाडी जसले महजोंग घोषणा गरे गाना, खेलाडी जसले आफ्नो चिप्स देखाईनेछ सल्लाह दिए.¿ के अर्को खेलाडीले जित्दैन? देखाइएको चिप्स फाल्नु पर्छ एक एक गरी।
यदि एक खेलाडी अर्कोको फाइल प्रकट गर्दछ, तपाईंले बीचमा घाइते खेलाडी तिर्नु पर्छ 5-60० अ .्क रेफरीले निर्णय गरे (कसले यो निर्णय पनि लिन्छ कि खेल जारी राख्ने कि नगर्ने)।
अवैध टोकनहरूको संख्या
यदि कुनै खेलाडीसँग १ turns भन्दा कम चिपहरू वा १ turns भन्दा बढी पालोहरूको बीचमा छ भने, उसलेसँग छ मृत हात, यद्यपि ऊ खेलिरहेको हुन सक्छ, छाडा छोड्न, आदि।